Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal- ‘साना दलले निर्वाचन चिन्ह नपाए निर्वाचनै हुन दिँदैनौं’
धिरेन्द्र झा ‘मैथिल’, राष्ट्रिय उपाध्यक्ष, नेपाल जनता पार्टी
० नेपाल जनता पार्टी भाजपाको भ्रातृ संगठन त होइन?
— नेपाल जनता पार्टी २०६१ सालमा निर्वाचन आयोगमा विधिवत् रुपमा दर्ता भएको हो । भारतको भाजपासँग नेपाल जनता पार्टीको चुनाव चिन्ह संयोगवश मिल्न गएको छ । केही एजेण्डाहरु पनि दुबै पार्टीको मिल्छ । राम्रो कुराहरु अरुबाट सिक्नु नराम्रो होइन । यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो पार्टी भाजपाको भ्रातृ संगठन हो । नेपाल जनता पार्टी आफ्नो स्वविवेकले नेपाली जनताका लागि खडा गरिएको हो ।
० नेजपा गठन भएको लामो समय भइसक्यो, विभिन्न चुनाव भाग पनि लियो तर अहिलेसम्म एक जाा प्रतिनिधित्व देखिएको छैन । किन ओझेलमा परेको होला?
— हाम्रो पार्टी ओझेलमा परेको छैन । विभिन्न चुनावमा हामीले भाग पनि लियौं । हामी विस्तारै जनताको बीचमा पुग्दैछौं । गत चुनावहरुमा हाम्रो पार्टीले त्यो किसिमको मत ल्याउन सकेन । तर आउने चुनावमा पार्टीको अवस्था राम्रो हुनेछ । अहिलेसम्म पार्टीले ७० जिल्लामा संगठन विस्तार गरिसकेको छ ।
० स्थानीय चुनावको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
— हामीले स्थानीय चुनावको तयारीमा लागि सकेका छौं । आगामी स्थानीय चुनावमा हामीले हरेक तहमा उम्मेद्वारी दिनेछौं । यस पटकको चुनावमा जनताले हामीलाई विश्वास गर्नेछ भन्ने आशा छ । चुनावी तयारी हामी जोडतोडका साथ गरिरहेका छौं ।
० स्थानीय चुनावमा तपाइँहरुले आफ्नो चुनाव चिन्ह त प्रयोग गर्न पाउनु हुन्न नि?
— स्थानीय चुनावमा सबैले आआफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा हामीले पाएको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्न पाउनु पर्ने माग हामीले गरिरहेका छौं । त्यसका लागि हामी संघर्षमा पनि छौं । हामीले सबै सम्बन्धित पक्षलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं, ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं । चुनावन जिकिँदै गएको छ, अब हामी सशक्त रुपमा आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउँछौं । हामी केन्द्रदेखि जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन गर्छौं । हामीलाई निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह दिनै पर्छ । यदि चुनाव चिन्ह दिइएन भने हामी चुनाव हुन्न दिन्नौं । यो निश्चित छ । हामीलाई बाइकट गरेर यिनीहरुले चुनाव गराउन सम्भव छैन ।
० चुनाव र आन्दोलनको तयारी सँगसँगै भइरहेको छ ?
— चुनावको तयारी त गर्नैपर्छ । हामी विश्वस्त छौं कि आयोगले हामीलाई चुनाव चिन्ह दिन्छ । यदि दिए नभने चुनाव हुन सक्दैन ।
० यदि तपाइँहरुले चुनाव चिन्ह पाउनु भएन भने चुनाव नै हुन नदिने ?
— अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक तरिकाले चुनाव हुन सक्दैन । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था छ भने सबै दलले आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने हो । हामीलाई बाइकट गरे चुनाव गराउन खोज्यो भने ठूलो आन्दोलन हुन्छ र चुनाव हुने अवस्था पनि रहँदैन । हामीले जिल्ला–जिल्लामा निर्वाचन आयोगका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्छौं, निर्वाचनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन दिँदैनौं । शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी आन्दोलन गर्छौं, चुनाव हुन दिन्नौं । स्थानीय तहको गत उपनिर्वाचनमा सबै दललाई आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न दिएकै थियो । तर यस पटक चुनाव चिन्ह किन नदिने ?यसको केही कारण पनि हुनुप¥यो नि ।
० राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त ६ दलले मात्रै आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाउने निर्णय किन भएको होला?
— राष्ट्रिय भनाउँदा ६ दलले बेइमानी गरेको हो । निर्वाचन आयोग एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष संवैधानिक संस्था हो तर त्यहाँ ती दलहरुले आआफ्नो कर्मचारी भर्ना गरेर जे भन्छ त्यहीं गरिरहेका छन् । उनीहरुको सही नियत भएको भए यस्तो निर्णय गराउने नै थिएन । ती दलहरु चुनावबाट डराएर हामीलाई आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोगबाट वञ्चित गर्न खोजेका छन् । जनताले आगामी चुनावमा ियनीहरुलाई विश्वास गर्ने छैन ।
० तपाइँहरु चुनाव रोक्न सक्नुहुन्छ ?
— जनता प्रतिकारमा उत्रिन्छन् । हामी त्यसको नेतृत्व गर्छौं । सरकारसँग सेना प्रहरी छ, त्यो लगाएर पनि चुनाव गर्न सक्ने अवस्था छैन । विगतमा सरकारले धेरै बल प्रयोग ग¥यो तर जनताको आवाजलाई दबाउन सकेन । जनताले पञ्चायती व्यवस्था, तानाशाहीतन्त्र, राजतन्त्र त फाल्यो । बल प्रयोग गर्न खोजियो भने झन् चुनाव हुन सक्दैन । त्यसैले शान्तिपूर्ण रुपमा चुनाव गराउनु छ भने सबै दललाई आआफ्नो चुनाव चिन्ह दिनैपर्छ ।
० तपाइँहरुको चुनावी एजेण्डा के हो ?
— हाम्रो मूल एजेण्डा भनेको नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्र हुनुप¥यो । अन्य धेरै एजेण्डाहरु पनि छन् । जनजीविका र विकास निर्माणसँग जोडिएका पनि विभिन्न एजेण्डाहरु छन् । हाम्रो एक सूत्रीय मूल एजेण्डा संघीय लोकतान्त्रिक िहन्दू राष्ट्र हो । जनताले यो मुद्दामा हामीलाई समर्थन जनाउँदै आएको छ । विश्वको एक मात्रहिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु ठूलो गल्ती गरेका थिए राष्ट्रिय भनाउँदा दलहरुले । हामीले नेपालमा पुनःहिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने भनेका छौं । जनगणनाअनुसार नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बी ८३ प्रतिशत छन् । हिन्दू धर्म मान्ने सम्पूर्णले हामीलाई विश्वास गर्छन् । यस्तै, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुराहरु त छँदैछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुशासन, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, विकास निर्माण लगायत थुप्रै कुराहरु छन् । यस्ता कुराहरु त सबैले गर्छन् र गरेका पनि छन् तर पूरा हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय भनाउँदा दलहरुले ती मुद्दाहरुलाई चुनाव परियोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्छन्, जनतालाई झुक्याएर मत तान्छन् तर सम्बोधन गर्दैनन् । हामीलाई जनताले विश्वास गरेर पठायो भने हामीले जे प्रतिबद्धता गर्छौं त्यो व्यवहारमालागू गर्छौं । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कामहरु हामीले गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आएका छौं ।
० तपाइँहरुलाई जनताले किन विश्वास गर्ने ?
— अहिलेसम्म जनताले ठूला भनाउँदा दलहरुलाई मत दिँदै आएका छन् । तर तिनीहरुले गरेका कति वाचा पूरा गरे ? जनतायसबारे चेतनशील भइसकेका छन् । नेपालमा सबभन्दा बढी सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्र हो, नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्छ । तर किसानहरु मारमा छन् । किसानका लागि केही पनि गर्न सकेको छैन । समयमा मलखाद्य उपलब्ध हुँदैन, सिंचाइको व्यवस्था छैन, आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैन । शिक्षाको अवस्था पनि त्यस्तै दयनीय छ । भ्रष्टाचार त्यतिकै मौलाएको छ । घर–घरमा सिंहदरबार भनियो तर भ्रष्टाचार मात्रै देखिन्छ । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु पाँचौं वर्ष पूरा गर्दैछन् । तिनीहरुले जनताको भन्दाआफ्नो लागि मात्रै विकास गरेका छन् । पाँचवर्ष अघि चप्पल लगाउने, साइकल चढ्ने नेताहरु अहिले करोडौंको सम्पत्ति जोडिसकेका छन् । त्यसकारण जनताले आगामी चुनावमा हामीलाई अवश्य विश्वास गर्नेछ । हामीले नीतिगतरुपमा सुधार गर्दै जाने हामीसँग योजना छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गर्छौं । हामी जे भन्छौं त्यो गरेर देखाउँछौं । यसका लागि जनताले हामीलाई एक पटक मौका दिनुपर्छ र दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।
० चुनावमा लाखौं–करोडौं खर्च गर्नुपर्छ, पैसा बाँड्नु पर्छ अनि जनताले मत दिन्छ भन्ने गरिन्छ नि?
— पैसामा मत किन्नु अपराधिक कार्य हो । जनताले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्छन् । विगतमा त्यस्ता विकृत्तिहरु देखा परेका थिए । तर यसपटक जनता पैसा लिएर कसैलाई मत दिनेवाला छैन । जसले लाखौं–करोडौं खर्च गरेर चुनाव जित्छ, उसले कस्तो विकास गर्छ भन्ने कुरा सबैले हेरिसकेका छन् । जनताले भोगिसकेका छन् । तिनीहरु त्यसरी जितेर आएपछि भ्रष्टाचार बाहेक अरु केही गर्न सक्दैन । अब त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरुलाई जनताले विश्वास गर्ने छैन । अब जनता चेतनशील भइसकेका छन् ।